Aasaaska maareynta mashruuca: arrimaha anshaxa
Posted by Tranquillus | Oct 18, 2020 | Shabakada
Maamulaha mashruuc ma noqon karaa mid hufan oo cadaalad ah, iyada oo aan la tixgelin dhowr su'aalood oo anshax ah? Tababaraha Bob McGannon, qoraa, ganacsade iyo la-taliye in ka badan 25 sano oo khibrad u leh maaraynta mashruuca, ayaa soo bandhigaya sida loo dejiyo loona dabaqo qiyamkaaga anshax inta lagu jiro noloshaada mashruuca. Waxay sharraxaysaa sharciyada la raaco iyo halista laga fogaado si loo xaqiijiyo kartidaada maamule mashruuc, iyadoo la raacayo shuruudaha lagu qeexay Machadka Maareynta Mashruuca (PMI).
Tababarka lagu bixiyo barashada Linkedin waa mid tayo sare leh. Qaarkood waxaa lagu siiyaa bilaash kadib markii la bixiyay. Markaa haddii mowduuc xiiseyo aadan ka waaban, ma niyad jabi doontid. Haddii aad u baahato inbadan, waxaad isku dayi kartaa 30-maalmood oo rukun ah oo bilaash ah. Isla marka aad isdiiwaangeliso ka dib, jooji cusboonaysiinta. Tani waxay adiga kuu tahay hubaal ah inaan lagaa laaban doonin muddada tijaabada ka dib. Muddo bil ah waxaad fursad u leedahay inaad naftaada ku cusbooneysiiso mowduucyo badan.
Aasaaska maareynta mashruuca: arrimaha anshaxa Diisambar 12, 2020Tranquillus
READ Miyaan xaq u leeyahay inaan u beddelo shaqo ka fadhiisinta muhaajiriinta oo loo beddelo shaqo ka fadhiisin edbin ah?
horeAasaaska maareynta mashruuca: Jilayaasha
socdaWaxyaabaha lagama maarmaanka u ah Kooxaha
Ilmaha jiran: shaqaalahaagu xaq ma u leeyahay maalmo fasax oo cayiman?
Aasaaska maareynta mashruuca: Miisaaniyadaha
Ganacsi otomaatig ah oo internetka ah oo loogu mahadcelinayo System.IO
Qiimee dulqaadka halista daneeyayaasha